Arsene Wenger Oo Saadaaliyey Xilliga Ay Arsenal Ku Guuleysan Doonto Horyaalka Premier League Ee Ay Muddada Dheer Sugaysay - Gool24.Net
Arsene Wenger Oo Saadaaliyey Xilliga Ay Arsenal Ku Guuleysan Doonto Horyaalka Premier League Ee Ay Muddada Dheer Sugaysay
Arsene Wenger ayaa saadaaliyey xilliga ay kooxdiisii hore ee Arsenal ku guuleysan karto horyaalka Premier League ee ay ugu dambaysay sannadkii 2003 oo uu isagu u qaaday, waxaanu qiray in hadda ay si layaab leh isku beddeshay kooxdu oo maalgelin cajiib ahna lagu sameeyey sannadihii ugu dambeeyey.
Arsenal ayaa xili ciyaareedka ku bilaabatay qaab wanaagsan, waxaanay sagaal dhibcood ka urursatay 12 suurtogal ahaa, iyadoo kaalinta afraadna kaga jirta shaxda kala-horreyna kooxaha ee waqtigan, isla markaana saddex dhibcood oo kaliya ka dambaysa Everton oo hoggaanka haysa.
Gunners ayaa Sabtida soo socota waxa u taalla shaqo weyn oo ah inay iska hor imanayaan Manchester City oo ay dhaawacyo kala daadiyeen, waxaana Arsene Wenger uu rumaysan yahay in la gaadhay waqtigii ay Arsenal soo afjari lahayd abaarta ka haysatay hanashada horyaalka 16kii sannadood ee ugu dambeeyey.
Macallinkan ruug-caddaaga ah waxa uu tilmaamay in inta uu tababaraha ka yahay Mikel Arteta ay Arsenal ku guuleysan doonto horyaalka, isagoo dhinaca kalena qiray in sannadihii ugu dambeeyey maalgelin heerkeedu sarreeyo lagu sameeyey kooxda oo ay hadda haysato ciyaartooyo wanaagsan.
Arsene Wenger oo ka jawaabayay su’aal ah haddii Arsena la gaadhay waqtigii ay ku guuleysan lahayd horyaalka oo ay awood u leedahay, waxa uu ku jawaabay: “Waan aaminsanahay taas, sababtoo ah, isagu (Arteta) si fiican ayuu u wadaa kooxda. Si wanaagsan ayay u socdaan, waanay garab taagan yihiin macallinkooda. Si fiican ayaanu wax usoo iibsanay, lacag badan ayaanu kharash garaynay labadii sannadood ee ugu dambeeyey, si degdeg ah ayaananu u helnay khayraad badan, taas oo aniga xoogaa layaab igu ahayd.
“Waxay ila tahay inuu Arteta haysto ciyaartooyo tiro iyo tayo ba leh, haa waanu ku guuleysan karnaa. Maxaa diidaya?”
Arsene Wenger ayaa la weydiiyey haddii uu ku laaban karo Arsenal, ayaa yidhi: “Ma garanayo inaan ku laaban doono, laakiin meesha kama saarayo.
“Wali waa kooxdaydii, walina waan jecelahay. Wali way i dhibtaa marka aanay si fiican u ciyaarin, marka ay wax wanaagsan sameeyaanna waan ku farxaa. Marka aan ka hadlayo Arsenal na, wali waxaan idhaahdaa ‘annaga, annaga, annaga, annaga.”